आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, हेर्नुहोस तोलाको कति ? - आजकोNepal
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, हेर्नुहोस तोलाको कति ?
संवाददाता २३ कार्तिक २०७७, 7:22 pm
काठमाडौँ, २३ कार्तिक । केही दिन देखी उकालो लागि रहेको सुनको मूल्य आइतवार पनि बढोत्तरी भएको छ । शुक्रबार सुनको भाउ तोलामै १ हजार रुपैयाँले उकालो लागेको थियो । आज त्यही क्रमले निरन्तरता पाउँदै ५ सय रुपैयाले बढेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको वेभसाइटका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ९७ हजार ७ सय तोकिएको छ । त्यसैगरी तेजावी सुनको मुल्य ९७ हजार २ सय कायम भएको छ । शुक्रवार छापावाला सुन ९७ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९६ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको थियोे। बिहीबार भने सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले ओरालो लागेको थियो। यो दिन प्रतितोला छापावाला सुन ९६ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन ९५ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतवार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ ।
आज २० रुपैयाले चाँदीको भाउ बढेको हो । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य १२७५ प्रतितोला तोकिएको छ । शुक्रवार चाँदीको भाउ तोलामै ४५ रुपैयाँ बढेर १ हजार २५५ रुपैयाँ कायम भएको थियो । विहिबार तोलामा ५ रुपैयाँले बढेर चाँदी १ हजार २१० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।